Aleksey Yakovlevich Kapler: जीवन कथा र जीवनी
Kapler Aleksey Yakovlevich - सोभियत Screenwriter, अभिनेता, निर्देशक र प्रसारकले। उहाँले धनी यहूदी व्यापारी को एक परिवार र, आफ्नो बुबाको इच्छा विपरीत मा जन्म भएको थियो, त्यो चरण मा प्रदर्शन गर्न थाले। उहाँले पहिलो प्रिय छोरी Stalina Svetlany Alliluevoy र अन्तिम प्रेम प्रतिभाशाली poetess युलिया Druninoy बन्न किस्मत थियो। आफ्नो "सिनेमा" उहाँले काम भएको सबैभन्दा लोकप्रिय टिभी सोभियत टेलिभिजनको शो, र चलचित्रहरू बीचमा थियो, राष्ट्रिय सिनेमा को masterpieces छन्।
जन्म र परिवार
कीव, एक धनी यहूदी परिवारमा - Aleksey Yakovlevich Kapler (1904 अन्य स्रोतबाट अनुसार) सेप्टेम्बर 28, 1903 मा जन्म भएको थियो। जन्म मा उहाँले लाजरस नाम दिइएको थियो, तर पछि त्यो परिवर्तन भयो। केटा पिता प्रसिद्ध कीव दर्जी Kapler Yakov Naftalievich थियो। आफ्नो स्टूडियो, मल मा स्थित मा, युक्रेनी राजधानी को सबै उच्च समाज अप लुगा। Kapler masterly कुनै पनि जटिलता को लुगा sewed। आफ्नो मोडेल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनियों मा शीर्ष पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। यस स्टूडियो साथै, जेम्स Naftalievich यो केवल न्यानो गर्न सम्भव थियो जहाँ कीव स्नान संस्था, मा सबै भन्दा राम्रो को एक स्वामित्व, तर पनि पूल मा पौडी खेल्न वा शक्ति नुहाउनु। सम्पत्ति enterprising दर्जी पनि उहाँले होटल "सियोनलाई" र पनि एउटा सानो सभाघरमा बाहिर भाडामा व्यावसायिक परिसर थिए।
थिएटर लागि आवेग
Yakov Kapler र पत्नी Raisa Zaharevna लाजरस आफ्नो बुबाको पाइला जानुहोस् र पारिवारिक व्यवसाय जारी हुनेछ भनेर आशा गरे। तर, व्यापार आफ्नो छोराको सानो बारेमा चिन्तित भएका छन्। उच्च विद्यालय फिर्ता उहाँले गम्भीर थिएटर कला रुचि र अभिनय पेशा बारेमा सपना गर्न थाले। स्कूल देखि साथीहरूसँग मिलेर र Dnieper को बैंकहरू मा overgrown ब्रश पछि लुकाउने, भागे, त्यो प्ले Kapler Aleksey Yakovlevich rehearsing थियो। बच्चाहरु 1917 मा, तुरुन्तै क्रान्तिको गरेपछि तिनीहरूले "Harlequin" भनिन्छ आफ्नै सानो थिएटर स्थापित कि धेरै अभिनय टाढा लगे। दर्जी छोरा पहिले नै नाम परिवर्तन गर्न व्यवस्थित र एलेक्सिस गर्न बन्द गरेको थियो। सबै भन्दा राम्रो बाल्यकाल मित्र Grishka Kozintsev र Serozhey Yutkevichem, पछि सोभियत सिनेमा को चिरपरिचित तथ्याङ्कले भइन् संग, Alexei Kapler दर्शकहरूलाई कठपुतली देखाउँछ Pushkin गरेको कविता आधारित देखाए।
मञ्चमा पहिलो कदम
शुरुआती mummers कीव मा, तिनीहरूले एक सपना को लोकप्रियता हासिल गर्न सक्दैन भनेर थाह थियो, र चाँडै तिनीहरूले Petrograd उत्प्रेरित गर्ने निर्णय गरे। यहाँ 1921 मा, Kapler, Yutkevich Kozintsev र Eccentric अभिनेता (FEKS) जो लियोनिद Trauberg चाँडै सामेल गर्न एक कारखाना स्थापना। भर्खरै स्थापित थिएटर मा प्रदर्शन शास्त्रीय निर्माण देखि मौलिक फरक छ। प्रतिनिधित्व कीव अभिनेता भरिएको हास्य, सर्कस चाल संख्या र किसिम, तीव्र सार्वजनिक उत्साह परिणाम।
Kapler Aleksey: अभिनेता काम र निर्देशक काम
फ्याक्स गरेको केही वर्ष पछि, लुसी Kapler (रूपमा Alexei मित्र भनिन्छ) दुई चलचित्रमा फिर्ता थियो। को "रोटेपिङ्", 1926 मा सिर्जना, उहाँले एक आवर्ती र लगभग imperceptible भूमिका मिल्यो। त्यसै वर्ष मा, जवान अभिनेता Gogol गरेको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति खेलेका "द ओभरकोट।" को फिलिमहरु मा काम खत्म पछि, Kapler को अभिनय पेशा मा निराश थियो। उहाँले आफ्नै चलचित्र सिर्जना गर्न लिखित अपरिचित भूमिका पदहरू बारम्बार चाहन्थे।
1927 मा उहाँले ओडेसा सारियो र एक सहायक प्रसिद्ध निर्देशक रूपमा काम गर्दछ अलेक्जेन्डर Dovzhenko फिलिम "शस्त्रागार"। तर, सहायक एउटा लामो पैदल घमन्डी Aleksey Yakovlevich Kapler सकिनँ। 1930 मा, त्यो आफ्नो पहिलो फिल्म, "एक महिला को सही" एक निर्देशक रूपमा हटाउनुभएपछि, र निम्न वर्ष उहाँले फिलिम को दोस्रो रील प्रकाशित "बारुद 12-28 छ।" तर भण्डारमा Lyusyu Kaplera तीतो निराशा: सोभियत अधिकारीहरूले आफ्नो निर्देशक गरेको दुवै काम देखाउन forbade। यस मामला मा, फिलिम "स्त्रीको सही" Decadent किनभने यसको मुख्य पात्र संस्थान अध्ययन गर्न उनको रोकियो जो उनको पति, बायाँ भन्ने तथ्यलाई को घोषणा गरिएको थियो।
सफलता को आगमन
प्रतिबन्ध पछि फिलिमहरु दिनुभएन अप Kapler Aleksey Yakovlevich। आफ्नो जीवनी उहाँले अत्यधिक उत्प्रेरणा एक मानिस र शायद वास्तविक लागि निरुत्साहित थियो भनेर देखाउँछ। होने निर्देशन असफल भयो, Kapler Screenwriter को पेशा सिक्न थाले। Alexey Yakovlevich यस क्षेत्रमा अभूतपूर्व सफलता राखेका। फिल्म "लेनिन अक्टोबर मा" र 1941 मा "1918 मा लेनिन" को लागि आफ्नो screenplays लागि, उहाँले प्रतिष्ठित stalin पुरस्कार सम्मानित गरिएको थियो। पछि Kapler सबै भन्दा प्रसिद्ध सोभियत लेखकहरूले एक थिए। उहाँले "Kotovsky" जस्ता चलचित्रहरू मा, "Amphibian मानिस", "नीलो बर्ड" र त्यसैले काम भएको छ, "स्ट्रिप उडान" "विभाग स्टोर को प्रदर्शन को लागि"। डी
को Svetlanoy Alliluevoy संग बैठक, युद्ध को शुरुवात
को 30 वर्ष मा Stalinist दमन यसलाई सोभियत बुद्धिजीवियों प्रतिनिधिहरूलाई एउटा ठूलो संख्या भोगे, तर तिनीहरूले Kapler स्पर्श थिएन। एक प्रतिष्ठित सरकार पुरस्कार प्राप्त गरे, उहाँले भाग्य को प्रेमीका भनिन्छ सकिएन गर्ने केही एक भए। तर यो लामो पछिल्लो थिएन। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को सुरुमा Alexey Us | एक युद्ध संवाददाता रूपमा अगाडि गए। नोभेम्बर 1942 मा, त्यो मास्को फर्के र अक्टोबर क्रान्ति को वार्षिकोत्सव समर्पित पार्टी stalin छोरा Vasily निमन्त्रणा गरिएको थियो। यो समारोह द्वारा Svetlana Alliluyeva को सबै मानिसहरूका को नेता को 16 वर्षीया छोरी उपस्थित थियो। Screenwriter, पहिले नै 39 वर्ष पुरानो गरिएका थियो, जसले, एक केटी एक दबाउन थियो, र त्यो उहाँलाई भने। तथापि, यस्तो उच्च र्याङ्किङ्ग व्यक्ति को छोरी भेट्न सजिलो थिएन। प्रकाश unaccompanied घर बाहिर गए कहिल्यै, र लेखक गार्ड को पर्यवेक्षण अन्तर्गत प्रदर्शनियों, सिनेमा र संग्रहालयहरु उनको ड्राइव बाध्य भएको थियो।
Kapler संग जवान Alliluevoy रोमन लागि उनले छ सबै बलिदान गर्न तयार थियो जसको लागि पहिलो गम्भीर भावना थियो। Alexei Yakovlevich Svetlana संग बैठक अघि एक सरकारी र दुई नागरिक विवाह पछि थियो। 1921-1930 साल उहाँले अभिनेत्री Tatyane Tarnovskoy विवाह भएको थियो। यो विवाह देखि उहाँले अनातोली छोरा अप भयो। को छोडपत्र पछि, उहाँले आफ्नो साथीहरूको तातियाना Zlatogorovoy एक समय को लागि बस्ने त अभिनेत्री Galinoy Sergeevoy सम्बन्ध थियो। तर Kapler लागि कम्तिमा फैलयो र नायक-प्रेमी को महिमा, उहाँले stalin छोरी संग प्रेम मा साँच्चै परे। उहाँले madly यो भद्र र शिक्षित महिला मनपराएका, र उहाँले आफ्नो भावना संग केहि गर्न सकेन।
Alexei Kapler र Svetlana Alliluyeva हां उमेर फरक सूचना र कता हो कता खुसी महसुस गरेनन्। आफ्नो दुर्लभ भ्रमणमा पूर्ण निर्दोष थिए, तर stalin, वयस्क प्रेमी छोरी बारेमा भएको एक क्रोध आयो। 1943. मा आफ्नो आदेश मा Kapler पक्राउ र संयुक्त राज्य लागि गुप्तचर आरोप थियो। झूटा शुल्क उहाँले जेलमा5वर्ष सुनाइसकेको र Vorkuta आफ्नो वाक्य सेवा गर्न पठाएको थियो। Svetlana पनि ठूलो thrashing आफ्नो बुबा प्राप्त, र एक वर्ष पछि आफ्नो भाइ ग्रेगरी Morozov मित्र विवाह गरे। एक जीवनकालमा, Svetlana5आधिकारिक मानिसहरू थियो, तर ती कुनै को आफ्नो पहिलो प्रेमी Kapler यस्ता न्यानोपन आफ्नो memoirs मा सम्झना छैन।
जेल जीवन, प्रणय Tokarski प्रेम
Vorkute Aleksey मा एकदम खुसीको कुरा बसोबास गर्छन्। प्रसिद्ध filmmaker लागि सहानुभूति संग वार्डेन र उसलाई शहर जेल छोड्न दिनुभयो। Aleksey Yakovlevich Kapler एक स्थानीय फोटो ल्याब मा काम गरे, र आफ्नो खाली समय मा उहाँले धेरै र जीवनको बारेमा सोच लेखे। Vorkuta मा, त्यो प्रसिद्ध सोभियत अभिनेत्री गर्ने युद्ध को सुरुमा बच्न जर्मन द्वारा कब्जा र, थियो भन्ने तथ्यलाई लागि वाक्य सेवा थियो Valentina Tokarski, भेटे, तिनीहरूलाई सहयोग गर्न सहमत भएको छ। निर्वासनमा छँदा लेखकले उसलाई विवाह गर्न आग्रह र जवाफ को सहमति प्राप्त। Tokarskaya brightened जेल हप्तादिन Alexei Yakovlevich पनि सबैभन्दा ठूलो निराशाको क्षण, त्यो आफु मार्न प्रयास गर्दा, लुपमा बाहिर उहाँलाई झिकेर।
1948 मा वाक्य Kapler समाप्त भयो। उहाँले कडा मास्को फर्कन र Alliluyeva टाढा रहन छैन सल्लाह। Alexey Us | stalin छोरी संग सभाहरूमा खोज्न लाग्छ र होइन, तर, यो बाहिर आफ्नो आमाबाबुले भ्रमण गर्न कीव जान राजधानी जाने निर्णय गरे। बित्तिकै उहाँले मास्को मा थियो, त्यो फेरि पक्राउ गरिएको थियो र अर्को निर्मित मामला Inta को गाउँमा शिविर पठाइएको थियो। यो समय Kapler कुनै पनि पक्ष छैन। अन्य कैदी साथ सँगै, त्यो मेरो मा मेहनत गरे। मात्र प्रेम Vorkuta प्रणय Tokarski बाँकी उसलाई कठिन समयमा बाँच्न मदत गरे। उहाँले प्रेम महिला संग अनुरूप उहाँले तिनीहरू सधैंभरि reunited गरिनेछ जब दिन हुनेछ भनेर विश्वास गरे।
जूलिया Druninoy संग बैठक
1953 मा उहाँले Iosif stalin मृत्यु र Kapler, अधिकांश मानिसहरू उहाँलाई मन पराएका जस्तै prematurely जारी थियो। नि: शुल्क र Tokarskaya एक पटक। मास्को आइपुगेपछि, प्रेमीहरूको रजस्ट्रार गर्न आवेदन दायर, र चाँडै आधिकारिक पत्नी भइन्। Alexey Us | फेरि आफ्नो पत्नी चलचित्र मा तारा अङ्कित गर्न निमन्त्रणा गरिएको थियो, लिपि लेखन सुरु भयो। तर आफ्नो परिवार मा आनन्द आउनु भएन। 1954 मा, 50 वर्षीया Kapler सिनेमाटोग्राफरहरू को संघ मा लिपि लेखकहरूले को उच्च पाठ्यक्रम मा सिकाउन निमन्त्रणा गरिएको थियो। आफ्नो pupils को एक जवान तर पहिले नै चिरपरिचित poetess युलिया Drunina थियो। प्रेमको समयमा दुवै निःशुल्क र अचानक तिनीहरूलाई भावना surging सामना गर्न प्रयास लामो समय को लागि थिएनन्। तर प्रेम जित्यो र 1960 मा, आफ्नो पति वा पत्नीको, Alexei Kapler र जुलिया Drunina विवाह संग छोडपत्र।
उपन्यास लेखक र कवि बारेमा मास्को सबै बताए। जो कोहि बाट प्रेमीहरूको आफ्नो भावना लुकाउन थिएन, कहिल्यै थकित प्रेम प्रत्येक अन्य पहिचान र सबै सार्वजनिक घटनाहरू सँगै देखियो। Drunina समर्पित पति, र उहाँले तिनलाई साथ बस्ने वर्ष को लागि, धेरै सुन्दर कविता आफ्नो सर्वश्रेष्ठ लिपि लेखे।
फ्रेम मा जब
1966 मा उनले कार्यक्रम "सिनेमा" Aleksey Yakovlevich Kapler (तल सेट तस्बिर) मा टिभी प्रस्तोता काम गर्न आए। उहाँले आफ्नो सहकर्मी बीचमा बाहिर उभिए। आकर्षक उज्ज्वल र charismatic, Kapler कहिल्यै कागज मा पाठ पढ्न थियो र क्यामेरा अगाडि गम्भीर अनुहार भएको छैन। उहाँले तिनीहरूले के लाग्छ भन्दै, improvising र पाहुनाहरूको प्रश्न छैन एकदम स्टूडियो मा सहज सोध्न डर छैन। Alexey Us | मनपर्ने सोभियत मान्छे लाखौं प्रमुख भए। आफ्नो "सिनेमा" सिनेमा मा सानो चासो भएका पनि ती देख्यो। यो 1972 अघि थियो कार्यक्रम को undisputed नेता
Alexei Kapler र जुलिया Drunina 19 वर्षसम्म विवाह गरिएको छ। दुर्भाग्यवश, तिनीहरूले सँगै छोराछोरीलाई छैन। उहाँले, सेप्टेम्बर 11, 1979 मृत्यु जो देखि आफ्नो अर्को एक महिना भन्दा कम जन्मदिन अघि आफ्नो जीवन लेखकले क्यान्सर भोगे, अन्तिम वर्ष। Alexey Us | Crimea मा एक पहाडी Kuzgun ब्रेकर मा स्थित Starokrymsky चिहान इलाका, मा गाडे। यहाँ चिहान गर्ने 1991 मा मृत्यु Yulii Druninoy छ।
बिली Milligan। तस्वीर र कहानी Billi Milligana
बक्सर आर्थर Beterbiev: पुष्ट उपलब्धि र लड
जीवनी Gennadiya Hazanova (फोटो)
कति बच्चाहरु सर्गेई Zhukov समूह "हात माथि" बाट?
Dzhek Uorden: छोटो जीवनी र Filmography
विषय मा एक निबंध "शब्द सम्बन्ध अस्तर": सरल सत्य मा एक निबंध
"Mayk लोरिस" संग Familiarity
विभाजन - एक लडाई एकाइ को छ? ड्रम प्रभाग
फोक्सो विद्रधि: यो रोग र पूर्वानुमान को प्रकृति
पहिलो सहायता के डूब छ?
Snowboards को प्रकार: सार्वभौमिक, फ्रिराइड, फ्रिस्टाइल
Azurite (पत्थर): जादुई र उपचारात्मक गुणहरू
बच्चा राति किन रुन्छिन्? डा सुझाव
यो प्रशस्त फसल खुसी बनाउन स्ट्रबेरी transplanted गर्दा
कनेक्टर आफ्नो bnc - यो के हो?
घर मिनी बार: रक्सी मा Cranberry tincture